Jennifer Lopez Sawirro Qaawan iyo Fiidiyowyo Galmo Qaawan - ScandalPlanet - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Kuwani Jennifer Lopez sawirada qaawan iyo aruurinta goobaha galmada waxay kaa dhigi doontaa inaad ku daadiso dhammaan surwaalkaaga. Midka hore wuxuu ka yimid filimkeedii ugu dambeeyay. Laakiin midka aan ugu jeclahay waa dhamaadka bogga. Halkaas waxaad ku arki kartaa JLo caan ah oo qaawan oo fiidiyoow jinsi jinsi ah. Runtii waa mid daran oo ceyriin ah. Oo iyadu waa ku habboon tahay in lagu daro ururinteena qaawan! Waxaan jeclaan lahaa inaan arko iyada oo si buuxda u qaawan sidoo kale, laakiin hadda, waxaan ku faraxsanahay in jilitaanka JLo uu ku soo ifbaxay jaakadaha dadweynaha!
Jennifer Lopez sawiro qaawan oo laga soo duubay fiidiyowga muusikada cusub
Eeg Jennifer Lopez sawirada qaawan ee Mert iyo Marcus (2020) ee halkeeda cusub ee 'In The Morning'. Waxay muujisay badhida, lugaha iyo siilka, laakiin ku dhowaad! Divva JLo waxay umuuqataa mid weyn da'deeda!
Jennifer Lopez qaawan iyo muuqaalo kulul oo la isku duubay
Jennifer Lopez waxay na siineysaa muuqaallo badan oo cajiib ah dameerkeeda iyo boobaheeda, markay u soo baxayso marxaladda naadiga oo ay ku ciyaareyso qoob ka ciyaarka! Jidhka cad ee maqaarka ku yaal oo cufan oo leh g-string ayaa la arkaa, markay wareegeyso oo ay foorarsato. JLo wuxuu fidinayaa lugaha, sanduuqyada, oo ruxaa dameerkan caanka ah! Wuu boodayaa oo hareerayaa. Waxay sidoo kale riixdaa xubinta taranka iyo wejiga wejiga wiilka. Ragga lacag ayey gashaa gunteeda oo lacag ayey ku tuuraan. Kadibna waxay kala fidinaysaa lugaha waanan arki karnaa dhexdooda. Isla mar ahaantaana, Constance Wu wuu daawadaa oo wuu bogaadiyaa, halka Wu uu haysto lacagtii oo dhan.
Muuqaalka labaad, Lopez waxay ku lebisantahay rajabeeto casaan iyo surwaal leh god furan oo muujinaya kala-goyskeeda qoto dheer! Qoob ka ciyaar qoob ka ciyaar ah ayey ku siineysaa qolka VIP-da wiilasha qaar ee ay la socdaan Kristina Asriyan iyo Alisa Ermolaev. Kadib ninku wuxuu lacag siiyaa Jennifer si ay u baxdo oo ay u baxdo. Ku raaxeyso dadweynow!
'Wiilka Iridda Xiga'
Tan dhexdeedamuuqaal qaawan oo qaawan, waad arki kartaaJennifer Lopez dhunkashada nin,ka dibna wuu ka dhunkadaa inta u dhexeysa naasaha ka hor inta uusan hoos u sii socon oo u soo jiido goonteeda hoosta si ay u muujisonigisyadaintay derbiga ku tiirsan tahay. Wiilkii markaadhunkado oo ka soo qaado, isagoo gacanta saaraya badhida. Waxay u guuraan qolka jiifka meeshawaxay leeyihiin galmo duurjoog ah. Waxaan markaa aragnaa isaga oo hoos ugu sii dhacayaleefleefo siilka Jennifer oo labada gacmood ku cadaadi gacmihiisa. Ku raaxayso muuqaalkan qumman ee Mamacita kafilimka 'The Boy Next Door'!
Hot Jennifer Lopez muuqaalada qaawan weli ma ahan kuwa caadi ah. Tani waa mid ka mid ah kuwa yar. Eeg Jennifer Lopez boogaha qaawan, ibta, iyo muuqaalka galmada.Dhabarka ayey u jiifsataa oo jacayl ayey ku dhex samaysaa booska adeegayaasha iyada iyo jacaylkeeda madow. Waqtigan xaadirka ah waxaan aragnaa naasaha Jennifer Lopez ama muuqaal aad uga wanaagsan oo ku saabsan ibtaheeda dhibcaha leh iyo naasaheeda quruxda badan, waxaan hoos ku aragnaa muuqaalka markii ay fuuleyso saaxiibkeed. Ku raaxeyso daawashada bamkan galmada Latina!
Jennifer Lopez waxay la leedahay galmo qiiro leh nin ka dib dabaasha. Gabi ahaanba waa qaawan tahay oo qoyantahay waxayna ku fariisataa dhabta nin. Waxaan aragnaa jirkeeda oo qaawan inta galmada socoto. Ka daawo Jennifer Lopez jir qaawan muuqaal galmo qaawan oo laga keenay filimka Angel Eyes.
Jennifer Lopez waxay ku raaxeeysataa galmada kulul. Dhabarka ayey dhulka ugu jiifsaneysaa oo nin bay ka wasaysaa. Lugaheeda waxay ku duudduubtay nin oo way isku tuujinaysaa. Laga soo bilaabo U-Turn.
Kulul Jennifer Lopez oo muujineysa naaskeeda bidix ee qaawan dhowr jeer inta lagu guda jiro taxanaha soo noqoshada oo ay ku jiraan muuqaalada iyada oo galmo la sameyneysa nin. Ibtaani way adagtahay!
Jennifer Lopez xubinta taranka iyo gogosha
Sug sug sug, si fiican ma u arkaa tan? Oops, Jennifer Lopez's xajmiga xubinta taranka waxay u egtahay mid fiican oo casiir leh dharkeeda sare ee NBCUniversal! Waxaa jira uruurin ballaaran oo la cusbooneysiiyay oo dhan cilladaha JLo kor u kaca ah!
JLo Qoyan Pussy In Miami
Gabadha aan jecel nahay ee Latina iyo caruusadda cusub ee Jennifer Lopez ayaa muujisay taranka qoyan intii ay ku sugnayd Miami iyada iyo ninkeeda Alex Rodriguez! Waan hubaa inuu taabanayay oo xoqay Lopez xubinta taranka intii ay gaariga saarnaayeen, iyo markii ay u baahnaayeen inay gaariga ka baxaan, xubinta taranka iyada oo wali gubaysa! Alex, baastar nasiib badan, ma rumaysan karo cidda aad nacayso!
Jennifer Lopez boobs iyo naaska
Boqoradda Latina Jennifer Lopez boobs iyo aruurinta ibta naaska! Haweenaydan galmada ah iyo jirkeeda jilicsan ayaa diiradda saaraya riyadeenna qoyan! Aamusnow si aadan u soo toosin xaaskaaga duqa ah intaad jilicsan tahay! Jennifer Lopez ibta qaawan ma jecla in la qariyo. Laakiin stylists-keeda ayaa xaliyay inay qariyaan jeerigaan casiirka leh! Miyirkeeda ayaa siibtay dhowr jeer, oo waxaan haynaa sawirada oo dhan! Booqo midkayaga kale qaawanaanta caanka ah iyo jerk!
Jennifer Lopez oo ku labisan dharka dabacsan
MILF Kulul Jennifer Lopez waxay muuqaalkeeda si buuxda u muujineysaa, iyadoo ku sii jeedda baalasha-dabaal-degga ka dib kal-fadhi ay ku dejineyso xeebta jasiiradaha Turks iyo Caicos. JLo waxay xidhatay dhar dabbaal madow waxayna muujisay dameerkeeda weyn. Naagtan waligeed ma duugoobi doonto.
saaxiib jaceyl star jffree
Susan Sommers xiisaha qaawan
Pitt Brad xiisaha qaawan
melania trump gabar on gabadh bilaa caymis ah